တွက်ချက်သေချာ ချက်ကြည့်ပါ | Food Magazine Myanmar
နိုဝင်ဘာလမှာတော့ ဆရာမနန်းစန်းစန်းအေးက ‘တောင်ပို့မှိုချဉ်စပ်’ အပါအဝင် ဟင်းလျာအတွဲအစပ် (၇)မျိုးကို စီစဉ်ထားပါတယ်။ အဆိုပါ ဟင်းလျာအတွဲအစပ်များ ကတော့ –
၁။ ဝက်နံရိုးကြော်၊ တောင်ပို့မှိုချဉ်စပ်၊ ငံပြာရည်ကြော်၊ ပဲရွက်သုပ်၊ အတို့စုံ၊
၂။ ကြက်သားမဆလာချက်၊ သခွားသီးသုပ်၊ ပိတ်စွယ်ဟင်း၊ ပူစီနံငါးပိထောင်း၊
၃။ ဆိတ်သားစဉ်းကော၊ ပဲကုလားဟင်း၊ မန်ကျည်းသီးကြော်၊ ကိုက်လန်ရွက်သုပ်၊
၄။ ငါးရံ့အူဆီပြန်၊ မုန်လာဥအချဉ်ရည်၊ ပုစွန်ခြောက်ကြော်၊ သရက်ကင်းအတို့၊
၅။ ပုစွန်အာလူး၊ ရေမုန့်ညင်းကြော်၊ ခရမ်းချဉ်သီးထောင်း၊ ဂျူးမြစ်၊ ဆလတ်ရွက် အတို့၊
၆။ ငါးခြောက်ခရမ်းသီးနှပ်၊ ကြက်ဥပြောင်းဖူးအသေးကြော်၊ ငါးပိသုပ်၊ သခွားဖိ အတို့၊
၇။ ဘဲသားမှိုဆီပြန်၊ ချဉ်ပေါင်းခါးကန်စွန်းရွက်အချဉ်ဟင်း၊ ငရုတ်သီးသုပ်၊ ပဲပင်ပေါက်ကြော်၊
အဆိုပါ ဟင်းလျာအတွဲ အစပ် (၇)မျိုးထဲမှ ဝက်နံရိုးကြော်၊ တောင်ပို့မှိုချဉ်စပ်၊ ငံပြာရည်ကြော်၊ ပဲရွက်သုပ်၊ အတို့စုံတို့ကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။
‘အမေမုန့်ဖိုးပေး . . .’
‘ဟိုမှာ ငါးထောင်တန်နှစ်ရွက်ယူသွား . . .’
‘ဟာ . . . သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ မုန့်သွားစားမှာ တစ်သောင်းထဲနဲ့ ဘာစားလို့ရမှာလဲ. . . ‘
‘အံမယ် . . . ငါးယောက်ဆို တစ်ယောက်နှစ်ထောင်၊ လေးယောက်ဆို တစ်ယောက်နှစ်ထောင့်ငါးရာ တော်ပြီ ပေါ့။’
‘တစ်ယောက်နှစ်ထောင်ဆိုရင်တော့ နို့အေးချောင်း တစ်ယောက်တစ်ချောင်းစီပဲရမှာ . . . ‘
‘တကယ်ပြောတာလား . . . ‘
‘အဟုတ်ပေါ့ အမေရဲ့ . . . အခုဖွင့်တဲ့ ပလာဇာအသစ်ကြီးမှာ စတော်ဘယ်ရီ ရေခဲချောင်း၊ သရက်သီးနို့အေးချောင်း၊ ဒိန်ချဉ်ရေခဲချောင်း၊ နာနတ်သီးရေခဲချောင်း၊ ပုံစံ လှလှပပနဲ့ အရသာ ကောင်းကောင်း နို့အေးချောင်း တစ်ချောင်းနှစ်ထောင်ပါတဲ့’
‘ပိုပိုလိုလို တစ်သိန်းလောက်တော့ ပေးပေါ့အမေရ’
‘ဟဲ့. . . မုန့်စားဖို့ တစ်သိန်းဆိုတော့ မလွန်ဘူးလား။ အဖတ်တင်မဲ့ဟာလေး ဘာလေးဆိုလည်း တစ်မျိုးပေါ့ . .’
‘ဘယ်လို အဖတ်လဲ အမေရဲ့ . . . ‘
‘သြော် . . . နာရီ၊ မျက်မှန်၊ လက်ကိုင်အိတ်လိုမျိုး ပွဲတက်မဲ့ လုံချည်၊ အင်္ကျီဝယ်မယ်ဆို ပေးရကောင်းသားပေါ့။ အခုတော့ အစားလေးတစ်လုပ်အတွက်နဲ့ များလွန်းတယ်။ မပေးဘူးဟယ်’
အမေ့လိုတမ်း ဟင်းဆို အိမ်မှာ ချက်စား၊ မုန့်လည်း ကိုယ့်လက်ဖြစ်ပဲ စားနေကြဆိုတော့ အဲဒီဈေးတွေနဲ့ တွက် နေရင်တော့ အားလုံးဈေးကြီးနေမှာပဲ’
‘နားမလည်ဘူး။ လိုချင် နောက်တစ်သောင်းထပ် ယူသွား။ အဲဒါနဲ့ပဲ စားခဲ့။ မလောက်ဘူးဆိုရင်လည်း ရေသောက်ပြီး ပြန်လာခဲ့လိုက်’
‘ဒါဆိုလည်း ထမင်းစားပြီးမှသွားမယ်။ ဒီလောက် ပိုက်ဆံနဲ့ကတော့ ရေခဲမုန့်တစ်ခွက်စီပဲရမယ်’
‘သဘောပဲ အမေ့ဆီမှာ ထမင်းဟင်းကတော့ အချိန်မရွေးဘဲ စားရင်းနဲ့ ဟင်းချက်နည်းလေး မှတ်ထားဦး၊ ချက်စားချင်စိတ်ပေါက်ရင် ချက်စားလို့ရအောင်’
တောင်ပို့မှိုချဉ်စပ်နဲ့ ဝက်နံရိုးကြော်အတွက် ဝက်နံရိုး သုံးဆယ်သား၊ နံနုလေးတွေဆို ပိုကောင်းပါတယ်။ ဝယ်ကတည်းက လက်တစ်ဆစ်သာသာ အပိုင်းလေးတွေ ခုတ်၊ ရေစင်စင်ဆေးပြီး စစ်ထားမယ်။ ဆား လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဝက်၊ အရသာမှုန့် အနည်းငယ်၊ သံပရာသီးတစ်ခြမ်းရဲ့အရည်၊ ခရုဆီ လက်ဖက်ရည်ဇွန်းတစ်ဇွန်း၊ ချင်း လက်တစ်ဆစ်၊ ကြက်သွန်ဖြူတစ်ဥ ညက်အောင်ထောင်းပြီး ရောနယ်၊ နာရီဝက်နှပ်ပြီး အကြော်မှုန့်တစ်ထုပ်၊ ကြက်ဥအကာတစ်လုံး ခပ်ပျစ်ပျစ် ရေနဲ့ ဖျော်ထားတာနဲ့ နယ်ပြီး ဆီတစ်ဆယ်သားထည့်ကြော်မယ်။ ရွှေဝါရောင်သန်းပြီး၊ အနံ့မွှေးလာရင် ဆီစစ်ပြီး၊ ဆယ်လို့ရပါပြီ။ ပူပူနွေးနွေး စားရင်တော့ အကောင်းဆုံးပါပဲ။
တောင်ပို့မှိုချဉ်စပ်အတွက် တောင်ပို့မှိုတစ်ဆယ်သား၊ ပြောင်စင်အောင် သန့်ရှင်းပြီး အနေတော်ပိုင်းဖြတ် ထားမယ်။
ချက်မယ့်အိုးထဲ ဆီငါးကျပ်သားထည့်မယ်။ ဆီပူလာရင် ကြက်သွန်နီတစ်ဥ၊ ကြက်သွန်ဖြူတစ်ဥ ရောထောင်းတာထည့်၊ ကြော်မယ့် ကြက်သွန်ဖတ်တွေ ရွှေဝါရောင်တောက်ပြီး အနံ့မွှေးလာရင် ကြိတ်ထားတဲ့ ခရမ်း ချဉ်သီးတစ်လုံးထည့်မယ်။ ခရမ်းချဉ်သီး အရည်ခန်းရင် မှိုထည့်မယ်။ ဆား၊ အရသာနဲ့အတူ မန်ကျည်းမှည့်ရည် နှစ်ဇွန်းစာဖျော် ထည့်မယ်။ အစပ်အတွက် ငရုတ်သီးမှည့် ငါးတောင့် ညက်အောင်ထောင်းပြီး ထပ်ထည့်မယ်။ ပွက် ပွက်ဆူလာရင် ချဉ်စပ်အရသာဖြစ်အောင် မြည်းပါ။ ကန်စွန်းရွက် တစ်ဆုပ်စာ ထပ်ထည့်ပြီး အိုးချလို့ရပါပြီ။
ပဲရွက်သုပ်အတွက် ပဲရွက်တစ်စည်း အရွက်နုနဲ့ အရိုး နုလေးတွေ သင်ယူပြီး ရေစင်စင်ဆေးမယ်။ စားခါနီးမှ ရေပွက်ပွက်ဆူမှာ နှစ်ပြီး၊ မြေပဲမှုန့်တစ်ဇွန်း၊ ပဲပုပ်အမှုန့် ဇွန်း တစ်ဝက်၊ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက်တစ်ဇွန်း၊ မန်ကျည်းရည် တစ်ဇွန်း၊ ဆား၊ အရသာအနည်းငယ်စီနဲ့ ရောနယ်ပြီး ကြက်သွန်နီပါးပါးလှီး၊ နှမ်းစေ့၊ ပုစွန်ခြောက်အမှုန့်လေးတွေ ဖြူးလိုက်ရင် ပဲရွက်သုပ်ရပါပြီ။ ပဲရွက်မရှိရင် ဒီ့ပြင် အရွက်တွေအစားထိုး သုပ်လို့ရပါတယ်။
အငန်အတွက် ငံပြာရည်ကြော်၊ သခွားသီး၊ ဆလတ်ရွက်အဆို့တွေကတော့ လွယ်လွယ်အမြဲမီးဖိုချောင်ထဲရှိနေမဲ့ အရာတွေမို့ တွဲဖက်စားရုံးပါပဲ။
ဝက်နံရိုးနဲ့ မှိုချဉ်စပ်ကို ဆိုင်မှာစားရင်တော့ တစ်သောင်းကျော်မှ စားလို့ရမှာပါ။ အသင့်သင့်ဆိုင်မှာပါ။ ခမ်းနားတဲ့ ဆိုင်တွေမှာဆိုရင်တော့ ဈေးက သုံးလေးဆဖြစ်သွားမှာ အသေအချာပါပဲ။ ခေတ်ရဲ့စတိုင်အရ၊ ဝန်ဆောင်ခတွေ မဖြစ်မနေ ထည့်ကိုတွက်ရမှာပါ။
စီးတဲ့ရေ ဆည်တဲ့ကန်သင်း အသင့်တင့်မျှတအောင် အမြဲတွက်ချက်နေရတဲံ အိမ်ရှင်မတွေအတွက်ကတော့ ချွေတာရမှာ အမှန်ပါပဲ။
မုန့်ဖိုးနှစ်သောင်းဆိုတာ ပလာဇာမှာ ဘာမှမစားရဘူးလို့ ပြောနေမယ့် ကိုယ့်အိမ်မှာတော့ ထမင်းဟင်း နှစ်ရက်စာလောက်ရတယ်ဆိုတာ ကလေးတွေကို ဘယ်လိုရှင်းပြရပါ့။
♦ ဝက်နံရိုး – ၃ဝ သား
♦ သံပရာသီး – တစ်ခြမ်း
♦ အကြော်မှုန့် – တစ်ထုပ်
♦ တောင်ပို့မှို – ၁ဝ သား
♦ မန်ကျည်းမှည့်ရည် – ၂ ဇွန်းစာ
♦ ကန်စွန်းရွက် – တစ်ဆုပ်စာ
♦ ပဲရွက် – ၁ စည်း
♦ မြေပဲမှုန့် – ၁ ဇွန်း
♦ ပဲပုပ်အမှုန့် – ဇွန်းတစ်ဝက်
♦ ကြက်သွန်ဖြူဆီချက် – ၁ ဇွန်း
♦ မန်ကျည်းရည် – ၁ ဇွန်း
♦ ပုစွန်ခြောက်အမှုန့် – အနည်းငယ်